Othisha bahlekisa ngama-sanitiser kahulumeni | Scrolla Izindaba
Othisha bahlekisa ngama-sanitiser kahulumeni
Othisha base-Mbodleni High School e-Mount Frere e-Eastern Cape badalule inkohliso eyenziwa nguhulumeni ngokunikezela ngama-sanitiser angasebenzi ezikoleni sasendaweni.
Ama-sanitiser ezandla anotshwala obusekelwe asebenzayo kumele abephakathi kuka-60% kanye no-70% ukuze ezokwazi ukususa noma yimuphi umkhondo wegciwane le-corona ezandleni noma endaweni.
Ocwaningeni lwabo, othisha basebenzise umentshisi ovuthayo ukuhlola ukuthi engabe utshwala bukhona yin kulezi zinhlobo ezintathu zama-sanitiser kanye nalena enikezelwe yizwe.
Imiphumela yakubeka obala ukuthi izwe linikezele ngama-sanitiser ezandla angamanzi kanti futhi awasebenzi ukususa umkhondo wegciwane le-corona.
Le vidiyo isabalale kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ihlekisa ngezinqubomgomo ezitholwa kuhulumeni kanye nohlelo olukhohlakele lamathenda nokuthi kusizakala amasapulaya angathembekile ngenkathi abazuzayo belokhu beshintshana.
UYusuf Cassim, omele iqembu le-DA e-Eastern Cape aphinde abe nguNgqongqoshe wezemfundo, uthi uselubonile ucwaningo lothisha base-Mbodleni.
Uthi ama-sanitiser anikezelwe abiza inani eliphindeke kahlanu kwinani okujwayeleke ukuthi kuthengwe ngalo kanti ukhathazekile ukuthi enye impahla ezothunyelwa kubantu kungenzeka yenziwe ngobudlabha.
“Njengamanje akukho ukulandelela okusemthethweni ngoba amasapulaya ahambisa izonto ngqo esikoleni bese othishanhloko basayinela impahla elethiwe.”